Iguzozi Ziri Ezi n’etiti Ọrụ na Ndụ - Ọrụ & Ego
Etu ị ga - esi kụrụ ihe ziri ezi n’etiti ọrụ na ndụ
Virgo ndakọrịta na ihe ịrịba ama ndị ọzọ
Balancekpụrụ ndụ-ọrụ bụ ihe siri ike nlekọta. Nnyocha e mere site n'ọnụ ụzọ ọrụ Monster.com na-egosi na pasent 60 nke ndị India na-arụ ọrụ na-eche na ha nwere nkezi ruo ogo ndụ. Otú ọ dị, ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-azụ ahịa ModMonk Anshul, onye guzobere SoulSchool, kwuru, sị: “Ọ dịghị mkpa ka anyị mee ka nguzozi dịrị. Ọ bụ ihe okike ma kee ụwa niile ihe anyị ga-eme bụ ịghọta na itinye ya n'uche na ndụ anyị. ' Otú ọ dị, olee otu mmadụ si eme nke ahụ?
Nke mbụ, ọ dị mkpa ịghọta ebe ị ga-adọta ya na otu esi aga ya. Ozugbo ị matara ebe ị na-akụ azụ, ọ na-adị mfe idozi ihe. Lee ụfọdụ ndụmọdụ.
Na ebighi ebi mgba
Ọ bụ ezie na ‘ime ihe ị hụrụ n’anya’ bụ ihe anyị niile na-agba mbọ, i kwesịkwara iche echiche banyere ‘ịhụ ihe ị hụrụ n’anya’. Rachana Sodhi, 34, onye ọrụ HR si Chandigarh, na-ekwu, 'A hụrụ m n'anya mgbe niile na eserese, ma were klaasị nka site na ụlọ akwụkwọ na kọleji. Achọrọ m ịhọrọ ọrụ na nka, ma achọpụtara m na, ọ gwụla ma mmadụ nwere ihe ịga nke ọma na ya, ọ gaghị akwagide gị n'ụzọ ego. ” Ebe ọ bụ naanị otu nwa ma chọọ inyere nne na nna ya aka n'otu oge, ọ họrọla ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ maka afọ iri gara aga mgbe ha chụsịrị ndị isi na nchịkwa azụmahịa na HR. 'Iji nọgide na-enwe mmekọrịta m, m na-aga klas maka nkà maka ụmụaka nọ n'ógbè m na ngwụsị izu,' ka ọ na-ekpughe. “Nke a na-enyere m aka ime ihe m hụrụ n'anya, na-adabereghị na ya kpamkpam. Ọzọkwa, ana m enwe mmasị iso ndị mmadụ na-emekọrịta ihe dị ka akụkụ nke ọrụ m, nke bụ ihe m hụworo n'anya banyere ihe m na-eme. ”
Ọ bụrụ na naanị ịme ihe mmadụ hụrụ n'anya ezughị n'oge ndị a, ịchọta ọnọdụ kachasị mma, dị ka Sodhi mere, bụ ezigbo nhọrọ. Nhọrọ ọzọ? Nweta ego ga-ezuru gị na mbụ, gbaa mbọ hụ na ị nwere ego na itinye ego ya nke ọma, wee banye n'ihe ndị ị hụrụ n'anya na njedebe nke ndụ gị! ” ọchị Sunita Bhaskar, 47, onye na-akwụ ụgwọ ego na onye na-anụ ọkụ n'obi site na Bengaluru. Sunita na otu ụlọ ọrụ ego na-arụ ọrụ ruo mgbe ọ dị afọ 43, tupu ọ kwụsị ọrụ ya iji chọpụta ụwa. Ọ na-aga njem njem mba ụwa ọkara na ezumike ezumike kwa ọnwa. Ihe nyeere ya aka bụ iji ego tinye ego mgbe ọ na-arụ ọrụ oge niile, yana ịnara obere ọrụ anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla mgbe ọ kwụsịrị ọrụ.
Na-ebi na oge
Dị ka Anshul si kwuo, nsogbu ahụ na-ebilite mgbe “anyị chọrọ ime ọtụtụ ihe n'otu oge.” Dịka ọmụmaatụ, mgbe anyị na-arụ ọrụ, anyị na-echekwa maka ezumike, ma ọ bụ ihe anyị ga-eme ma anyị laghachi n'ụlọ ma ọ bụ chee banyere ọdịnihu. Mgbe anyị na-atụrụ ndụ ma ọ bụ na ezumike, anyị na-echegbu onwe anyị ka otu ọrụ ga-esi gbakọta, ma ọ bụ ndepụta ndepụta dị iche iche ga-eziga oge ezumike. Nnyocha nke Monster.com dekwara na 67 pasent nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na India India mgbe ụfọdụ, mgbe mgbe ma ọ bụ na-eche mgbe niile banyere ọrụ mgbe ọ na-anọghị na-arụ ọrụ. 'Anyị na-esetị onwe anyị ụzọ abụọ n'akụkụ ọ bụla oge ọ bụla,' ka Anshul na-ekwu, na-echetara anyị na anyị kwesịrị ibi n'oge a. “A na-akpọ nke a ịbụ onye maara nke ọma na ịchebara onwe gị echiche. Ọ bụrụ na anyị ejiri nlezianya na-eme nke a, anyị ga-enwe ike ịchọpụta usoro adịghị mma nke usoro ọrụ anyị na nke onwe anyị. ”
Gbanwee Echiche Gị
Ọtụtụ mgbe, ọ bụ echiche anyị dị mbụ na-egbochi anyị ịhụ ihe anyị na-eme n'anya. Onye edemede, onye na-eme ihe nkiri na onye nta akụkọ, Weam Namao ekwuola na mbipụta dijitalụ, 'Ourkpọasị anyị na-enweta n'ụzọ nke ịhụ ihe anyị na-eme n'anya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị ahọrọla ihe ahụ. Ọ bụrụ na ị pụrụ ịmụta nkà n'ịhụ ihe ị na-eme n'anya, mgbe ahụ ị nwere ike ịme ihe ọ bụla, dịka ihe ndị ị hụrụ n'anya ịme. ” Anshul kwenyere, sị: “Ọ bụ anyị na-eme ka echiche nke inwe echiche ziri ezi gharakwa ịdị na-adabaghị adaba n'omume na ụkpụrụ onwe onye anyị bi.” Nnyocha ahụ kwukwara na pasent 78 nke ndị India na-arụ ọrụ chọrọ ka a kọwaa oke ọrụ dị n'etiti ọrụ ha na ndụ onwe ha.
Chọta ihe masịrị gị, maọbụ ịhụnanya, maka ihe ị na-eme dịkwa oke mkpa dị ka ịme naanị ihe ndị ị hụrụ n'anya. N’ezie, ọ ga-enwerịrị ihe gbasara ihe ị hụrụ n’anya nke ị chọghị ime. Were mama Teresa dị ka ihe atụ. A kọọrọ na ọ naghị achọ ka ya na ndị mgbasa ozi na-emekọrịta ihe, dịka o chere na ọ napụrụ ya inyere ụmụntakịrị aka, mana ọ bịara ghọta na ọ bụ akụkụ na ihe ọ na-eme iji hụ na ọtụtụ ndị mmadụ chọpụtara banyere nsogbu nke ụmụaka na-eche ihu ma nwee ike inyere aka. Yabụ, kama iche na ị na-eme ihe ị hụghị n'anya, chọta ihe masịrị gị n'ime ya ga - enyere aka belata nkụda mmụọ ọ bụla ị nwere ike inwe. Anshul na-agbakwụnye, “nguzozi kwesịrị ịbụ n'uche, na mmụọ. Anyị kwesịrị ịnakwere ọnọdụ a na-enweghị nkwekọrịta, kama ịchọta mmejọ. Lelee ihe ị na-eme dị ka nkuzi ndụ. ” Ihe ọ bụla ị na-eme ga-akụziri gị ihe dị iche iche - njikwa oge, ihe ọmụma ọhụrụ, ndidi, na ihe ndị ọzọ-ọ dịkwa mkpa ka ị biomie ihe mmụta ndị ahụ. 'Nwee obi ụtọ n'oge a, na-amara na ọ bụ ahụmịhe nke anyị na-amụta ma na-eto eto,' Anshul mụmụrụ ọnụ ọchị.
Wepụta oge iji mee ihe ndị ị hụkwara n'anya. Kwe ka ọrụ gị mezuo nzube ya ka ị na-ewepụta oge maka ihe ndị ị hụrụ n'anya n'ezie. Mee ka ọ dị ọhụrụ, nye ume ma megharịa n'ihi na ndụ dịka ị maara na ọ dị mkpụmkpụ. Mee ka ọ baa uru!
Gụọ kwa: Olee otú ịnọgide na-enwe Work-Life Balance Mgbe Are Bụ Onye entrepreneur na A mama m
esi merie ntutu daa
ịhụnanya akụkọ bekee fim
ndepụta ntutu ntutu maka ụmụ agbọghọ
hollywood kpochapụwo ihunanya fim
ejiji maka ụmụ nwanyị dị mkpụmkpụ
nne s ụbọchị ruturu